''Sabni dinagdeen hin cimne bilisummaa qaba jennee hin yaadnu'' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dr Taadasaa Qana'aa Pirezidaantii Univarsitii Amboo
Sabni dinagdeedhaan hin cimne karaa kamiinuu bilisummaa qaba jedhamee hin yaadamu jedhu Dr. Taaddasaa Qana'aa pirezidaantiin Yunivarsitii Amboo. Bilisummaan dinagdeedhaan alatti akka hin yaadamne dubbatu.
Kana kan jedhan yaa'ii lammaffaa Waldaa Aksiyoona Ijaarsa Waliif Yunivarsitii Ambootti gaggeeffameen booda.
"Sabni dinagdeedhaan miidhame bilisummaa siyaasaa hammamillee yoo qabaate, dinagdeen hin cimne taanaan bilisummaa qaba jedhamee hin yaadamu" jedhaniiru.
Kanaafis jecha warra adii "Garaa duwwaa addunyaa bilisummaa qabdu ijaaruun hin danda'amu" jedhu fayyadamuun ibsu.
Waldaaleen aksiyoonaa akka Ijaarsaa Waliif kunimmoo dinagdee laafe humna walitti kuusanii gara guddinaatti cehuuf guddaa akka gargaaru himu.
"Biyya kaappitaala guddaa qabu keessatti namni dhuunfaan hojjetee sooromee biyyaafis bu'aa buusuu mala" jedhu.
''Gaaffii ummataa hoggantootaan geenya'': Dargaggoota
Kora 'Dinagdee Cuquliisa' irraa maaltu baratame?
Garuu biyya akka keenyaa kanatti yeroo baayyee namootni humna beekumsaa fi maallaqa qaban walitti fidanii yoo waliin hojjetan malee kopha fiiganii warra daldala keessa ture wajjin dorgomuun hin yaadamu" jechuun faayidaa waliin hojjechuun qabu ibsu.
Waliin taanaan dinagdeen ni cima, dinagdeen cime ammoo carraa hojii bal'aa waan uumuuf hojii dhabdummaa keessaa bahuufis mala filatamaa ta'uu eeru Dr. Taaddasaan.
Hojii gaggeessaan waldaa aksiyoona Ijaarsaa Waliif Obbo Dachaasaa Abdiisaa waldichi dinagdee Oromiyaa gama ijaarsaatiin cimsuu fi bu'aa gaariis damee kanarraa argachuufi jedhu.
Gama carraa hojii uumutiin qabaatu ilaalchisees, "Hanga ammaattiyyuu dargaggoota Oromoo hedduuf carraa hojii banuu dandeenyeerra" jedhu.
Konkolaachiftoota, ogeessota ijaarsaa fi opereetaroota maashinaraa dabalatee namoonni hedduun mindeeffamaniiru.
''Gara fuula duraatti dargaggoota Oromoo kumaatamaan lakkaa'amaniif carraa hojii banna jennee abdannas," jedhaniiru Obbo Dachaasaan.
"Aksiyoonni kun bu'aarratti qofa osoo hin taane hawaasarratti xiyyeeffatee hojjeta. Warri akka keenyaa hawaasarratti xiyyeeffatee hojjetu ammoo haqaa fi dhugaadhaan, qulqullina, yeroo jenneetti fi gatii madaalawaa hanna hin qabneen Oromiyaa ijaaruurratti xiyyeefanna.''
''Bu'aa argachuun karoora keenya lammaffaadha," kan jedhan Obbo Dachaasaan, rakkoo damee kanaan jiru furuuf akka hojjetan eeru.
Waldaan Aksiyoona Ijaarsaa Waliif waldaalee aksiyoonaa 'Waliif' jahan keessaa isa tokko yoo ta'u, bara 2016'tti hundaa'e.
Mormii siyaasaa Itoophiyaa: Gama paartilee mormituun dargaggoota caalaa jaarsoliitu waltajjiirra jira
Dinagdee Cuquliisa: Kora dhimma qabeenya bishaan sirnaan fayyadamuurratti fuulleffate
Shamarree Ameerikaa baadiyyaa Jimmaa manashee godhatte
Dhibeen gifiraa Itoophiyaatti namoota 39 galaafate
'Kooriyaan Kaabaa yaalii meeshaa waraanaa haaraa ifatti gaggeessite'